IHE AKW BEKWỌ G WKWUO MGBE INWALLR C AKWTKWỌ AKWERKWỌ AKW -KWỌ AKW NewsKWỌ-Ningbo COFF Machinery Co., ltd
IHE A G NOTR W AKW WKWỌ MGBE IME AKW CKWỌ AKWERKWỌ AKWERKWỌ AKW .KWỌ
Oge: 2020-07-09 ikwu: 3
Ọtụtụ mmadụ na-amalite ị drinkụ biya biya biya. Ndị isi na-achọkwa ahịa biya biya ma na-azụta akụrụngwa biya biya. Kedu ihe ị maara banyere nlezianya nrụnye ọrụ biya biya?
Nke mbu, ndi okacha amara biya biya ga etinye ya!
Na mgbakwunye, ekwesịrị itinye uche na gburugburu ebe echichi nke igwe biya biya, dị ka drainage na idebe ihe ọcha. Ọ bụrụ na arụnyere igwe bekee gị ọ bụghị na ala nke mbụ mana na ala nke abụọ ma ọ bụ ebe ọzọ, tụlee ikike ibu ọrụ nke ụlọ na ịtọba mmiri na mmiri.
N'ikpeazụ, ntinye ihe ọ equipmentụ beerụ biya biya bụ ihe dị mkpa iji tụlee onwe ya iji ọfụma: ọ bụ ezie na igwe biya biya na-eji ụbọchị niile ọnụọgụ, ọ bụrụ na anyị egeghị ntị na akụrụngwa ikuku dị ka ebe, nwere ike ịpụta onwe ya mgbe ị na-eji ya akụrụngwa adịghị adaba, ị naghị etinye ihe n'ụzọ nkịtị iji chekwaa akụrụngwa biya.
Previous: LLỌ ARLỌ AARON Ⅱ: E Nwere ọtụtụ ihe ọmụma ị nwere ike ghara ịma n'ịgba mmiri
Ọzọ: LLỌ AKW ARKWỌ ARON: E Nwere ọtụtụ ihe ọmụma ị nwere ike ghara ịma n'ịgba mmiri